မြတ် ကထိန်သင်္ကန်း လှူဒါန်းသည့်လ
Published 07/11/2013 | By Pyay City
မြန်မာတို့၏တန်ဆောင်မုန်းလသည် မြန်မာဆယ့်နှစ်လရာသီ၏ ရှစ်လမြောက် လမြတ်အခါဖြစ်ပါပေသည်။ ဗြိစ္ဆာရာသီသို့ဆင်းပြီး ရှေးဆရာတို့ကဆိုထားသော မိုးလေကင်းပတန်ဆောင်မုန်းလပင်ဖြစ်ပေသည်။ ခ၀ဲပန်းနှင့်မိတ်ဖက် မာလာပန်းတို့ ဝေဆာနေသောလဖြစ်သလို ခ၀ဲပန်းအ၀ါနှင့် သံဃာတော်တို့အား ကထိန်သင်္ကန်းလှူဒါန်းသောကြောင့် အ၀ါပေါ်အ၀ါဆင့်လို့ အလွန်မှကြည်နူး နှစ်သက်ဝမ်းမြောက်စရာ လဖြစ်ပါသည်။ တံငါတာရာကွန့်မြူးသော လဖြစ်ပေတော့သည်။
သီတင်းကျွတ်လပြည့် အဘိဓမ္မာ အခါတော်နေ့
Published 19/10/2013 | By Pyay City
သီတင်းကျွတ်လသည် မြန်မာတို့၏သတ္တမမြောက် လဖြစ်သည်။ မိုးရာသီကုန် လုနီးချိန်ဖြစ်သည်။ မိုးလည်းမပီ ဆောင်းမမည်သေးသော ကာလဖြစ်သည်။ အနောက်တောင်မုတ်သုံလေ တစ်ပြည်လုံးမှ ဆုတ်ခွာစပြုချိန်ဖြစ်သည်။ အားနည်းသောမိုးကြွင်းမိုးကျန်များသာ ရွာလေ့ရှိသည်။ ခြေခင်းလက်ခင်းသာစပြုချိန်၊ ပွင့်လင်းရာသီအကြို ကာလဖြစ်သည်။ ” သီတင်းကျွတ်ပြီ တူရာသီ အဿာဝဏီရှိန်ဝါထွန်း၊ ကြာမျိုးလည်းစို မီးမြင်းမိုရ် ဗဟိုအချာထွန်း” ဟု ကင်းဝန်မင်းကြီးက သီတင်းကျွတ်လကို စာဖွဲ့ခဲ့သည်။
ပေါက်ခေါင်းမြို.မှ အရေကြီးဖုန်းနံပါတ်များနှင်. ဌာနဆိုင်ရာ ဖုန်းနံပါတ်များ
Published 18/09/2013 | By Pyay City
မျှဝေပေးသည့် အနေဖြင့် ပေါက်ခေါင်းသတင်းမှ ကူးယူဖော်ပြထားပါသည်။
မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ.မြို.နယ်မူး 45006,45007 ၊မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ. စခန်းမူး
45011၊စာတိုက် 45008 ၊မြို.နယ် စီမံကိန်းဦးစီးဌာန 45009၊သစ်ထုတ်ရေး
(ယန္တယား) 45010၊ပြည်သူ.ဆောက်လုပ်ရေး 45012 ၊
ရှေးအကျဆုံးနှစ်ပေါင်း (၁၂၆) နှစ်ခန့် သက်တမ်းရှိသော သရက်ဂေါက်ကွင်း
Published 16/09/2013 | By Pyay City
မြန်မာနိုင်ငံကို အင်္ဂလိပ်-မြန်မာ ဒုတိယစစ်ပွဲအပြီးတွင် သရက်မြို့ သည် အင်္ဂလိပ်ပိုင်နက်ထဲ ကျရောက်သွားခဲ့သည်။ သရက်နှင့် ဆင်ပေါင်ဝဲကြားရှိ ဒဂုံမော်ကျေးရွာသည် အင်္ဂလိပ်နှင့် မြန်မာပိုင်နက်၏ နယ်ခြားမှတ်တိုင်ဖြစ်လာသည်။ အင်္ဂလိပ်အစိုးရသည် ၁၈၈၇ ခုနှစ် တွင် သရက်ဂေါက်ကွင်းကို စတင်ဖောက်လုပ်ခဲ့ကြောင်း သမိုင်းမှတ်တမ်းများအရ သိရသည်။
Published 24/07/2013 | By Pyay City
ခေါင်းကိုက်နေပါသလား၊ သံပုရာသီးကို ထက်ခြမ်းခြမ်းပြီး နဖူး တလျှောက် ပွတ်တိုက်ပေးပါ။တဆစ်ဆစ် ကိုက်နေတာတွေ သက်သာသွားပါလိမ့်မယ်